गुणस्तर मिश्रण को विकल्प - एक नवजात जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण को एक। उत्पादन मात्र भोक छैन पूरा गर्नुपर्छ, तर पनि सबै आवश्यक भिटामिन र खनिज संग बच्चाको शरीर पोस्ने; को पाचन प्रक्रिया सुधार कि prebiotics शामिल; यो स्वादिष्ट छ र पाचन समस्या उत्पन्न छैन। यसलाई "Cabrita" समीक्षा को एक मिश्रण यो शायद एक एलर्जी प्रतिक्रिया provokes र colic रोक्छ छ भनेर भन्न छ।
जसको संरचना पोषण मूल्य मा फरक छ "Cabrita" को एक मिश्रण, बच्चालाई कुरा को विकास र वृद्धि लागि सबै आवश्यक छन्। र तपाईं आफ्नो बच्चा breastfeed सक्नुहुन्छ भने, तपाईं यो उत्पादनसँग स्तन दूध प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। मिश्रण राम्रो बच्चाको शरीर द्वारा अवशोषित हुन्छ, यो प्राकृतिक र उच्च गुणस्तरीय बाख्रा दूध समावेश गर्दछ।
संरचना, lactose र तरकारी बोसो समावेश जो बीच प्राकृतिक तेल (rapeseed, पाम, सूर्यमुखी) शामिल DigestX जटिल बाहिर खडा। बाख्रा मिश्रण comprises छांछ प्रोटिन ध्यान, बाख्रा दूध र सारा दूध पाउडर बाख्रा दूध स्किम्ड। यो उत्पादन संरचना मकै स्टार्च र fructooligosaccharides, galactooligosaccharides समावेश छ। मिश्रण खनिज संग समृद्ध छ। उनको जोडा माछा तेल मा, ओमेगा3देखि docosahexaenoic एसिड को स्रोत। साथै, उत्पादन arachidonic एसिड, भिटामिन, taurine समावेश गर्दछ। "Cabrita" choline र nucleotides, bifidobacteria र mezoinozitol समावेश छ।
मिश्रण मा DigestX जटिल स्तन दूध को संरचना नमूना भनेर याद गर्नुहोस्। यो पाचन सुधार कब्जियत रोक्छ। यो क्याल्सियम को तीव्र अवशोषण बढवा दिन्छ। यो ऊर्जा विनिमय बढावा। Prebiotics fructooligosaccharides (FOS) र galactooligosaccharides (GOS) सँगै प्रत्यक्ष जीवाणुहरु Bifidobacterium बी बी-12 प्रतिरक्षा बलियो साथ छ। चयापचय प्रक्रियाहरू संलग्न भएको nucleotides सञ्चालन bioregulators प्रकार्य। ओमेगा3र ओमेगा-6 मस्तिष्क र दृष्टि सकारात्मक प्रभाव छ।
उत्पादन दायरा "Cabrita"
ब्रान्ड अन्तर्गत "Cabrita" उत्पादित शिशु सूत्र पहिलो रुचाउने लागि बाख्रा गरेको दूध र अनाज। यसरी, उत्पादन मिश्रण तीन प्रकारका विभाजित छ:
"Cabrita-1" -06 महिना देखि बच्चाहरु को लागि।
"Cabrita-2" -612 महिनाका बच्चाहरूको लागि।
"Cabrita-3" - एक वर्ष भन्दा पुरानो बच्चाहरु को लागि।
बच्चाहरु "Cabrita" (बाख्रा गरेको दूध एक प्रमुख घटक छ) porridge चार प्रकार मा विभाजित छन्:
स्याउ र खूबानी संग अनाज;
एक केले सात अनाज को porridge।
ती सबै आफ्नो खन्याउन न्यानो पानी पर्याप्त को तयारीमा, तत्काल छन्। बच्चाको शरीर पोषक र ऊर्जा Saturate। सारा दूध, चीनी, नुन, कृत्रिम र flavorings समावेश छैन।
शासक Kabrita गोल्ड - बाख्रा गरेको दूध आधुनिक मिश्रण छ। यो बच्चा को पूर्ण विकास लागि आवश्यक सामाग्री समावेश गर्दछ।
उत्पादन कब्जियत र कृत्रिम रुचाउने गर्न संक्रमण परिणामस्वरूप पाचन पर्चा अन्य विकारहरु, हटाइ, प्रोटिनको घटक छाँटकाँट, व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक उमेर कोटी लागि अनुकूल बनेको छ। यसरी, निम्नानुसार मिश्रण मा छांछ प्रोटिन र छेना को अनुपात प्रस्तुत:
"Cabrita-1" - 60% छांछ प्रोटिन र 40% छेना।
"Cabrita-2" - 47% छांछ प्रोटिन र 53% छेना।
"Cabrita-3" - 37% छांछ प्रोटिन र 63% छेना।
मिश्रण राम्रो tolerability र digestibility छ। को संरचना मा कम प्रोटिन αs1-छेना र प्रोटिन β-छेना बढी छ। पहिलो Assimilation र दूध पाचन प्रक्रिया बनाउँछ।
जटिल डाइजेस्ट पाचन प्रक्रिया बढावा। ऊर्जा विनिमय मा सकारात्मक प्रभाव। क्याल्सियम अवशोषण बढाउँछ। यो कब्जियत रोक्छ र मल कोमल। DHA / ω-3 र ARA / ω-6, मस्तिष्क विकास सकारात्मक प्रभाव र दृष्टि सुधार। Nucleotides प्रदान राम्रो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, डीएनए र आरएनए लागि आधार कपडा कार्य। प्ले ऊर्जा विनिमय को प्रक्रिया मा एक प्रमुख भूमिका। प्रोटीन, बोसो र कार्बोहाइड्रेट संग संश्लेषण मा आउनुहोस्। Prebiotics र probiotics प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन। एक स्वस्थ आंतों वनस्पतिहरूको कायम।
मिश्रण हल्का मलाईदार स्वाद छोराछोरीलाई प्रेम छ। सबै घटक सन्तुलित र एक तीन वर्ष को उमेर को बीच बच्चाहरु को शारीरिक आवश्यकता पूरा। गाई गरेको दूध प्रोटिन गर्न एलर्जी बच्चाहरु को लागि आदर्श। Maltodeksin चीनी, कृत्रिम additives र colorants समावेश गर्दैन।
शिशु सूत्र "Cabrita" बच्चालाई खुवाउने अघि तुरुन्तै तयार र दर तालिकामा संकेत गर्नुभयो।
मिश्रण को सय ग्राम लागि तीन लिन्छ scoops शीर्ष सुक्खा उत्पादन (बारेमा 13.5 G) बिना पोख्नुहोस् उसिनेर पानी 90 G। तयारी निम्न चरणमा समावेश:
10 मिनेट लागि उम्लिरहेको गरेर बोतल र pacifier जीवाणुरहित।
40 ° सी मा पानी को एक कन्टेनर मा इच्छित रकम पोख्नुहोस्
सुक्खा उत्पादन को पानी आवश्यक रकम मा पोख्नुहोस्।
बोतल बन्द र मिश्रण (तेजी कन्टेनर मिलाउ)।
मिश्रण को तयारी मा गर्न सक्छन् मा लेबल निर्देशन पालन गर्न आवश्यक छ। समाप्त उत्पादन भण्डारण र पछि प्रयोग को remnants हुन सक्दैन।
बच्चालाई लागि खाना पकाउने लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन:
गैर-sterilized pacifiers र बोतल;
उत्पादन म्याद समाप्त;
मिश्रण पछि गरिब भण्डारण र यातायात थियो।
उद्घाटन पछि प्याकेजिङ्ग एक महिना भित्र प्रयोग र तापमान छैन +25 उच्च भन्दा ° सी राखिएको हुनुपर्छ
बाख्रा दूध को एक मिश्रण को प्रशासन लागि सङ्केत गर्छ
"Cabrita" को एक मिश्रण राम्रो बच्चाको शरीर द्वारा अवशोषित हुन्छ (समीक्षा crumbs खुशी संग उपचार गर्न भनेर भन्न)। गाई गरेको दूध को प्रोटिन गर्न घृणाको साथ बच्चाहरु र अक्सर साथै feedings पछि अप थुक्नु, एक कम भएको लागि उपयुक्त lactase कमी। Antireflyuksornymi गुण possesses। यो पेट रीस उठाउनु भनेर छैन र चाँडै बच्चाको शरीर द्वारा अवशोषित एक नाजुक बनावट छ। मिश्रण, पाचन बढावा कब्जियत हटाउँछ र पखाला, ऐंठन र सुनिंनु सामना गर्न मद्दत गर्छ।
उत्पादन "Cabrita" मात्र nucleotides र prebiotics, तर probiotics, वा "प्रत्यक्ष" दूध संस्कृति हो। तिनीहरूले एक हात मा, हो, प्रतिरक्षा प्रणाली सकारात्मक प्रभाव छ, र अन्य मा - प्राकृतिक आंतों वनस्पति को गठन लाइ रोक्छ।
बाख्रा गरेको दूध एक मिश्रण, साथै गाई मा रूपमा, एलर्जी, बिटामा-छेना पशु प्रोटीन बुझाउँछ देखि हुन सक्छ। जब प्रोटीन एक एलर्जी प्रतिक्रिया विशेष hypoallergenic उत्पादनहरु चयन गर्न। यस मामला मा, crumbs लागि खाना को चयन विशेषज्ञहरु द्वारा ह्यान्डल गर्नुपर्छ।
अझै पनि, यो राम्रो छ - "नानी" वा "Cabrita"?
बजार मा धेरै मिश्रणों को हो, तर सबै भन्दा लोकप्रिय बोकाको गरेको दूध "नानी" र "Cabrita" छन्। तिनीहरूले मात्र प्रोटीन kozeina समावेश गर्दछ। दुवै पहिलो र निम्न उमेर समूहहरूको लागि मिश्रण उत्पादन दोस्रो कम्पनी: बच्चाहरु को लागि, उमेर 0-6 महिना,612 महिना बाह्र महिना भन्दा बढी। पहिलो मिश्रण मा012 महिनाका बच्चाहरु लागि निमित्त जो "नानी-क्लासिक" को विकल्प, छ।
दुवै मिश्रण छाँटकाँट र यसको संरचना मा प्राकृतिक भोजन गर्न सकेसम्म बन्द गर्नुहोस्। एक कम प्रोटिन सामग्री संग बाख्रा गरेको दूध देखि गरे। "Nannie" मा मात्र बाख्रा दूध पाउडर प्रयोग गरिन्छ, र मिश्रण छेना (अनुपात - 20/80) मानिन्छ, र "परिवर्तनीय" मा - आंशिक स्किम्ड दूध र बाख्रा दूध छेना सूचक 60/40 संग छांछ प्रोटीन को ध्यान।
बाख्रा दूध संरचना परिवर्तन को एक मिश्रण को निर्माण मा। यो भन्दा तरकारी तेल र माछा तेल बदलिएको छ, तर यो प्राकृतिक बोसो को आन्द्रा मा खाएको खाना को प्रक्रिया मा एक परिणाम दिन छ। त्यसैले, यस्तो घटक को "परिवर्तनीय" मा "नानी" भन्दा कम छ।
मानसिक क्षमता विकास र स्नायु प्रणाली polyunsaturated फैटी एसिड प्रभावित को गठन मा, त्यसैले यसलाई आफ्नो मिश्रण समावेश महत्त्वपूर्ण छ। छोराछोरीको उत्पादनहरु लागि पनि arachidic र docosahexaenoic एसिड, जो केन्द्रीय स्नायु प्रणाली र रेटिना को गठन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह बनेको हुनुपर्छ। दुवै मिश्रण यी आवश्यकताहरू पूरा।
धेरै विशेषज्ञहरु पाम तेल सामग्री संग बच्चा खानेकुरा किन्न सल्लाह छैन। "नानी" मा यो, त्यसपछि "Cabrita" यो घटक समावेश रूपमा छ। दुवै मिश्रण भिटामिन र खनिज जटिल बच्चाको शरीर को सबै आवश्यकता पूरा गर्ने बना हुन्छ, तर "नानी" भन्दा पनि कम "कार्बो" मा फलाम।
अर्को मिश्रण "Nannie क्लासिक" यसको विपरीत, nucleotides र prebiotics बनेको छैन "Nannie-1,2" र "Cabrito-1,2,3 'जो तिनीहरूलाई समावेश गर्न। Nucleotides प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो मा उपयोग गर्दै छन्, र prebiotics को आंतों microflora को स्थिरता समर्थन। यस्तो मिश्रण पखाला भोगिरहेका छोराछोरीलाई दिन छैन।
विपरीत "Nannie" "Cabrita" एक प्रोबायोटिक comprises। यो एउटा प्रत्यक्ष bifidobacteria प्लस prebiotic छ। यस्तो संरचना आंतों microflora मा, तर पनि प्रतिरक्षा प्रणाली मात्र छैन लाभदायी छ, तर एकै समयमा आफ्नै आंतों वनस्पति को गठन मा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
दुवै मिश्रण तिनीहरूले पसलहरुमा फेला पार्न सजिलो छैन, महंगी।
1800-2000 rubles - 400 को जार र भण्डारमा G 800 ग्राम 400 भन्दा बढी मा पैक "Cabrita" (मूल्य धेरै आमाहरु को लागि दुर्गम उत्पादन बनाउँछ) को एक मिश्रण 1000-1300 rubles, र 800 ग्राम भुक्तानी गर्न हुनेछ। बैंक लागि। यो महंगा र उच्च गुणस्तरीय मिश्रण छ।
समीक्षा महिलाहरु बच्चाहरु लागि बच्चा पोषण मा अवस्थित
"Cabrita" प्रतिक्रिया को एक मिश्रण ज्यादातर सकारात्मक पाए। आमाहरु यो राम्रो र छिटो पानी संग पतला भन्न, यो पचाउन सजिलो छ। यो colic र एलर्जी कारण छैन। बच्चालाई पोसिलो त्यो सबै रात उठ्दै, सुतिरहनु भएको थियो पछि। महिला उनि एक भोक छ र intestines समस्या बाँकी, यो धन्यवाद मिश्रण कि बच्चाहरु वजन प्राप्त भन्छन्। गाई गरेको दूध गर्न घृणाको साथ उपयुक्त बच्चाहरु। राम्रो संरचना रूपमा मानव दूध गर्न सकेसम्म नजिक Celebrating।
1800 rubles - यो मिश्रण को नकारात्मक पक्ष यसको उच्च लागत समावेश गर्नुहोस्। 800 ग्राम, छ दिनको लागि पर्याप्त छ। केही बच्चाहरु मिश्रण आन्द्रा को एक विकार कारण, र त्यसपछि अर्को स्विच गर्न भएको थियो। केही आमाहरू "Cabrita" (प्रतिक्रियाहरू यसको राम्रो स्वाद र त्यो बच्चाहरु रुचि भन्ने तथ्यलाई संकेत) को एक मिश्रण पसलहरुमा फेला पार्न कठिन छ कि गुनासो। कहिलेकाहीं यो एक लामो समय को लागि खोजी गर्न आवश्यक छ।
दर्जा शिशु सूत्र
सबै आमाहरू बच्चालाई स्तन दूध खुवाउन किन्न सक्छन्। मिश्रण जानको लागि धेरै कारणहरू छन्। सधैं आमा स्थिति प्रभावित गर्न सक्नुहुन्छ। यो बिन्दु मा आफ्नो बच्चा समर्थन शिशु सूत्र मद्दत गर्नेछ। सबैभन्दा लोकप्रिय र विशेषज्ञ evaluators बच्चा खाना दर्जा निम्नानुसार:
"Nutrilon" मिश्रण। शिशुहरू लागि सबैभन्दा माग र लोकप्रिय उत्पादन। यसलाई आफ्नो बच्चाहरु को स्वास्थ्य समर्थन र आंत्र बानी मा disturbances हटाउन मद्दत गर्छ। उहाँले एक विस्तृत सीमा छ। "Nutrilon" को एक मिश्रण सबै प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक, colic र ग्याँस घटना रोकथाम समावेश गर्दछ। बच्चा सामान्य वृद्धि र विकास बढाउँछ। को आंतों microflora एउटा लाभदायक प्रभाव।
"नेन" को एक मिश्रण - दोस्रो सर्वाधिक लोकप्रिय। स्विट्जरल्याण्ड मा गरे। दायरा lactose निःशुल्क र gippoallergennye मिश्रण समावेश गर्दछ। बेबी खाद्य स्वास्थ्य सुधार र बच्चा को पूर्ण विकास बढावा जो भिटामिन र खनिज जटिल, समावेश छन्। "नेन" को एक मिश्रण मात्र खुवाउने लागि उपयुक्त छ। यो एक प्रति खाना रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो पाचन पर्चा सकारात्मक प्रभाव छ।
"Nestozhen"। अर्को लोकप्रिय शिशु सूत्र। स्विट्जरल्याण्ड मा निर्मित। यसलाई स्वस्थ बच्चाहरु लागि हो। संरचना सबै आवश्यक भिटामिन र खनिज बच्चाहरु छन्।
"Nutrilak"। रूसी बच्चा खाना श्रृंखला। यो जीवन को पहिलो वर्ष बच्चाहरु देखाउँछ। यो गाई गरेको दूध आधारित छ। मिश्रण भिटामिन र खनिज संग समृद्ध छ। यो prebiotics समावेश र चीनी को एक भाग छैन। एलर्जी बच्चाहरु को लागि उपयुक्त।
"Humana।" जर्मनी मा उत्पादन। दायरा फरक उमेरका लागि पाँच श्रृंखला समावेश छ। त्यहाँ बच्चा मिश्रण, एलर्जी र अकाल। तिनीहरूले कुनै सुगंध र परिरक्षकों समावेश गर्दछ। आधार एक उच्च गुणस्तरीय गाई गरेको दूध रूपमा कार्य। मिश्रण भिटामिन र prebiotics संग समृद्ध छ। यो कुनै फ्रैक्टोज, sucrose र लस समावेश गर्दछ।
"बेबी"। घरेलू उत्पादन को एक मिश्रण। यसलाई भिटामिन र खनिज को crumbs विकास लागि सबै आवश्यक समावेश छ। किफायती र उच्च गुणवत्ता को हो। यो GMO, रंग, चिनी र परिरक्षकों को संरचना मा गर्दैन।
"Agusha"। जन्म देखि बच्चाहरु को लागि रूसी निर्माता यो सुक्खा र तरल मिश्रण। त्यहाँ प्रयोग गर्नका लागि तयार छ भनेर खाना को सानो प्याकेटहरू छन्। सबै उत्पादनहरु भिटामिन र खनिज संग समृद्ध छन्। ओमेगा3फैटी एसिड, nucleotides र आयोडिन त्यहाँ admixture।
बच्चालाई खाना लागि सही छनौट गर्न, यो एक विशेषज्ञ हेर्न आवश्यक छ। आखिर, मात्र त्यो सही आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति निर्धारण गर्न विद्यमान समस्या र बच्चा समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ।
पनि आफ्नो बच्चाहरु महसुस को उजुरी को अभाव मा, एक विशेष मिश्रण को आहार को परिचय को सम्भाव्यता बारेमा बाल विशेषज्ञ सल्लाह लिनुहोस्। पनि सबैभन्दा महंगा उत्पादन आफ्नो बच्चाहरु को लागि उपयुक्त नहुन सक्छ भन्ने मनमा राख्नुहोस्। स्वास्थ्य र राम्रो किनमेल!
शिविरमा मा बच्चाहरु को लागि आउटडोर खेल। हास्यास्पद, रोचक, शैक्षिक बच्चाहरु को लागि खेल
बोतल देखि एक बच्चा कसरी wean गर्न? के उमेर मा सुरु गर्न उपयुक्त छ?
म मा मासिक को धूपघडी जानुहुन्छ?
एक मध्यस्थ कम्प्युटर मार्फत accelerates। प्रोक्सी कसरी प्रयोग गर्ने
बिरालोहरूको लागि उत्कृष्ट भिटामिन
जब र अवस्था: लागि महिला उत्तर काम
घर एक सोडा छ भने - डण्डीफोर उन्मुक्ति!